Xildhibaan gaari 3RZ ah iyo $5,000 siinaya ergadii codka siisa doorashada soo socota. | XAL DOON
Home NEWS Xildhibaan gaari 3RZ ah iyo $5,000 siinaya ergadii codka siisa doorashada soo...
Xildhibaan gaari 3RZ ah iyo $5,000 siinaya ergadii codka siisa doorashada soo socota.
Mid kamida xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa balanqaad buuran u sameeyay ergada 100-ka ka badan ee codadkooda dhiibaneysa doorashada soo socota.
Xildhibaan Cadow Cali Gees oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee beeshiisa ayaa ka dalbaday iney codkooda siiyaan, si uu uga soo muuqdo xildhibaanada baarlamaanka soo socda oo haatan qaban qaabadeeda ay bilaabaneyso.
Cadow Cali Gees oo lagu tiriyo Xildhibaanada ugu hantida badan ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si cad u sheegay inuu ergey kasta oo codkiisa siiya uu ugaga bedelanayo gaari Surf 3RZ ah iyo lacag dhan$5,000 ah, taasoo uu sheegay ineysan ehey mid aan la sii sugi doonin oo ay haatanba diyaar ka tahay.
Ninkan ayaa dad ku dhow waxey sheegeen ineysan wax buuran xagiisa ka eheyn musuq maasuqan uu doonayo inuu sameeyo si uu mar kale u soo noqdo, iyadoo laga warqabo inuu yahay nin ganacsade ah oo gawaaridan u soo dagta.
Dadka falanqeeya Siyaasada dalka ayaa kuu sheegaya in doorashada soo socota ay noqon doonto mid ka musuq maasuq badan tii sanadkii 2016/17 taasoo uu ku soo baxay madaxweyne Farmaajo.